Umbono weshishini -I-Hebei yoBungqina-obuSekwe kwiTekhnoloji yoNyango Co., Ltd.
Yakha iqonga leenkonzo zonyango
Ukuthembela kumaziko akhoyo aneengca kunye ne-intanethi yedata enkulu,
Zama ukwakha "isibhedlele, ugqirha, usapho, umntu", "Abantu, ubomi" njengenye yeqonga lenkonzo yezonyango.
Ukukhuthaza umanyano lokujonga isifo kunye nomgaqo-nkqubo wonyango
Ukuthatha ithuba lokuxhamla okwabelana okwenyani kwedatha kunye nolwazi phakathi kwe-Unicom ephezulu nephantsi, Ukwakha umanyano lwezonyango ngokuhamba kwedatha eguqukayo kwikhaya "lesibhedlele sikagqirha" kunye "nesigulana sikagqirha", kunye nokuchongwa okuphezulu kunye nemowudi yenkonzo yonyango .
Ziqhelanise nezinto ezintsha zonyango kunye nophuhliso
Ngenkxaso yeZiko laseShenzhen lobuchwephesha, isiTshayina iAkhademi yeSayensi iSikolo seShenzhen seSikolo seTekhnoloji yeHarbin Institute of Technology kunye nenkxaso yezobuchwephesha kwisibhedlele iXuanwu seCapital Medical University, Ziqhelanise nendlela entsha yonyango kunye nophuhliso, kwaye ulwele ngakumbi- ukulungiselela impilo yesizwe.
Sombulula abantu abaqhelekileyo
Kunzima ukubona ugqirha. Kuyabiza Ukwakha "isibhedlele saphambi kwexesha, esibhedlele nasemva kwesibhedlele" ngokwakha iqonga lolawulo olubanzi lwezifo ezinganyangekiyo
Inkqubo yenkonzo yomjikelo wobomi ikhokelela ekutshoneni kwezixhobo zonyango ezikumgangatho ophezulu, Siya kusombulula ingxaki yokuba kunzima kubantu abaqhelekileyo ukubona ugqirha, kodwa kuyabiza ukubona ugqirha.